Kooxaha PSG iyo Juventus oo albaabka u garaacay kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos – Gool FM
Kooxaha PSG iyo Juventus oo albaabka u garaacay kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos
Dajiye October 15, 2020
(Yurub) 15 Okt 2020. Kooxaha Paris Saint-Germain iyo Juventus ayaa si hoose ula socda xaalada kabtanka Naadiga Real Madrid ee Sergio Ramos, iyadoo ay jirto inuusan qandaraaska u kodhinin ilaa iyo haatan.
Qandaraaska Sergio Ramos ee kooxda Real Madrid ayaa dhacaya xagaaga soo socda, halka wali qandaraaskiisa aan la cusbooneysiinin ilaa iyo haatan, xilli wararka ka imaanaya Spain ay muujiyeen inuu doonayo inuu ku sii nagaado Los Blancos, maadaama maamulka kooxda ay doonayaan sidaas oo kale.
Dhanka kale, kooxda Paris Saint-Germain ayaa wali raadineysa inay xoojiso daafaceeda kaddib markii ay ku guuleysan weyday mudadii ugu dambeysay ee suuqa kala iibsiga inay la saxiixato badelka Thiago Silva oo ku biiray naadiga reer London ee Chelsea, kaddib markii qandaraaskiisa kooxda uu dhamaaday.
Paris Saint-Germain ayaa ka dhigatay Sergio Ramos mid ka mid ah bar-tilmaameedyadeeda ee suuqa kala iibsiga, sida uu sheegay wargeyska “Le 10 Sport” ee dalka Faransiiska.
Si kastaba ha noqotee, Paris Saint-Germain ma heli doonto waddo ay ugu xaareyso wadada saxiixa kabtan Ramos, maadaama uu ciyaaryahanka doonayo inuu sii joogo kooxda difaacaneysa horyaalka La Liga ee dalka Spian.
Kooxda reer Talyaani ee Juventus ayaa sidoo kale xiiseyneysa adeega Sergio Ramos, waxaana laga yaabaa inay u soo bandhigto qandaraas weyn si ay ugu qanciyaan inuu markal kula midoobo saaxiibkiisii ​​hore ee Cristiano Ronaldo magaalada Turin.
Manchester United oo indhaha ku heysa bar-tilmaameedka kooxaha Real Madrid iyo Barcelona
Halyeeyga reer Brazil ee Ronaldo oo fariin xamaasad leh u diray Neymar Jr